Ultralight miaraka amin'ny frame
Ny 2 lb., 5 oz. Ny Osprey Exos 38 dia nomena vola ho toy ny "SuperLight" pack, fa ny capacity 38L (2320 cubic inch) dia ampy ho an'ny olona saika haka amin'ny alina, raha toa ianao ka vonona ny hametraka tsikelikely sy handrodana ny lay eo ambanin'ny fonosana. Azo alaina ihany koa amin'ny isa 48L sy 58L.
Amin'ny ankapobeny dia heveriko fa ny Exos 38 dia safidy lehibe ho an'ny mpihetsiketsika isan'andro izay maniry ny entana tena mahafinaritra izay afaka mandeha amin'ny androm-piainana andro maromaro na fitsangatsanganana mandritra ny alina ; Tsara ny "lanjany fampiharana" ho an'ny fampiasana azy.
( Ity ny toro-hevitrao momba ny fisafidianana ny haben'ny kitapo. ) Ny fonosana lehibe ao anatin'io sehatra io dia mety ho an'ny mpivarotra an-dalamby lava lavitra be izay maniry hazavana kely nefa tsy manary ny tombontsoa azo avy amin'ny rafitra misy. Raha manana faniriana farafaharatsiny ianao fa tsy afaka miteraka kitapo miaraka aminà rafitra anaty, dia mety ho ny laharana pack ianao.
Ny singa hafa ao amin'ny tsipika Exos dia ny Exos 48 (48L / 2930 cubic inch) ary ny Exos 58 (58L / 3540 cubic inch). Ny fitehirizana mavesatra eo amin'ny fonosana lehibe dia mahatalanjona: ny Exos 58 dia mavesatra 2 lbs., 10 oz. for a medium. (Ny fonosana telo dia misy amin'ny tendrony kely, midina ary lehibe. Ampio 2 na 3 litatra ny haavony ho an'ny lehibe, esory ny 2 na 3 litatra ho an'ny kely.)
Raha mbola mifikitra amin'ny lanjan-danja natolotra ho an'ireo entana ireo ianao (mihoatra ny 20 livres ho an'ny Exos 38, hatramin'ny 30 ho an'ny Exos 58) dia tsy manakorontana ny fampiononana ianao, ary ny entana dia ho tsara ary miovaova.
Ny hany zavatra hijerena dia ny elanelana misy eo amin'ny tontolon'ny kitapo mena sy ny kitapo tena; Raha manome ventilation tsy mety resy izy io, dia midika ihany koa fa mila mamandrika tsara ny enta-mavesatra ianao.
Andramo ny famakiana ny fomba fijery lalindalina kokoa ny Exos 38.
Ny Exos 38 dia manana alim-bary misy alim-bary tokana, manintona mba hamoronana sehatry ny rivotra eo anelanelanao sy ny kitapo.
Ny fitambaran-tsokosoko tokana, tafiditra ao anatin'ny vatan'ny fonosana, dia mihazona ny zava-drehetra raha toa ka misy tambajotra mena manerana ny lamosinao dia manampy amin'ny fitazonana ny zava-drehetra.
Ny hany tokana tena tsikaritro eto dia ny endrika mifanahatahiry ao anaty fonosana dia kely kokoa sy ambany lavitra noho ny nampiasako azy. Mahagaga ahy ny manamarika izany, saingy tsy tena mampiavaka ny fomba ampiasanao ilay poketra izany; Azonao atao ny manangona zavatra bebe kokoa mihoatra noho ny lalina.
Ny zava-drehetra dia vita amin'ny 100D avo-tenenina tsy misy kapila ary 100D high-tenacity ripstop. Nanararaotra izany aho nandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra, anisan'izany ny fitsangatsanganana, ary mampiseho ny akanjo kosmetika kely fotsiny. Manontany tena aho ny amin'ny faharetan'ny paosin-damba miverina ho an'ireo mampiasa azy (tsy manana aho), fa ny paosin-tavoahangy mena dia manao tsara hatramin'izao.
Ny Exos 38 dia tonga miaraka amina fitaovana enti-mody, raha jerena ny habetsaky ny mpandeha an-tariby. Ho an'ny andro androany na ny ultralighters dia ny bikabary mampihorohoro, ny rambony misoratsoratra sy ny rindrina fatorana fatoriana dia azo alaina, izay mamonjy anao saika 4 sapitra amin'ny lanjan'ny entana. (Misy tapa-tavy fanampiny iray hialana amin'ny votoatin'ny fonosana rehefa nesorina ny fonony voalohany.) Mandeha miverimberina ary tsy mahavaha azy rehetra ao anaty fonosana?
Apetraho indray ny lela.
Ny ambiny ao amin'ny kitapo napetraka dia tsara tarehy marobe fa, indray, dia hentitra tanteraka. Ankoatra ny rojom-bolo marevaka, ny paosy dia manana tadim-peo mifatotra tsara. Ny mpanamory fiarandalamby iray (eo anoloana) dia be dia be, ary mitazona ny bao roa eo an-damosiny - tsara indrindra ho an'ireo izay mampiasa ny bao azy matetika. Ny tavoahangy tavoahangy mena eo amin'ny andaniny roa dia afaka manaiky tavoahangy na mitsangana na midina mankany amin'ny fahazoana mora, eny fa na dia manana ny kitapo aza. Misy koa ny poketra mena anoloana izay, raha ny marina, dia tsy nampiasa betsaka aho.
Fampiononana sy fanasitranana
Gaga aho tamin'ny fampiononana Exos 38. Tsy manana fako be izy io, fa mifanentana tsara tokoa izy io ka tsy mila famolahana betsaka. Ny endriky ny fijanonana dia midika fa tsy misy na inona na inona hipoitra eo amin'ny andilanao rehefa mameno ilay fonosana ianao (olana iray no hitako tamin'ny poketra hafa maivana).
Ny hany fitaovam-piadiana dia ny fampiatoana "AirSpeed", izay mahatonga ny elanelana misy eo amin'ny kitapo sy ny lamosinao. Tena mahafinaritra ny fitsaboana, fa raha tsy manangona azy marina ianao, dia tsy maintsy manala ny zavatra rehetra eo aminao izy, na manao ahoana na manao ahoana ny fomba fanitsinao ny banga. Izany dia miteraka fihazakazahana tsy misy fandeferana sy fihazonana am-bava - ny karazana zavatra hitanao haingana raha toa ka manana fingotra tahaka ahy ianao.
Ny fihetsika dia mitazona ny zavatra mavesatra sy manakaiky ny hazondamosinao. Na izany na tsy izany, misy antony iray mahatonga ny kitapo rehetra hametraka ny bladdera miteraka, matetika ny iray amin'ireo entana tena goavana izay entinao, manohitra ny lamosinao. Tandremo tsara indrindra ny tsy hamenana ny paosy ao amin'ny tampoka; Averimbereno indray ireo entana mavesatra etsy ambany.
Ankoatra io fanavakavahana io? Kitapo lehibe, miaraka amina fampiononana lehibe amin'ny lanjan-kely. Farany, na tsy tokony ho azonao ny Exos 38 dia midika hoe raha tsy ianao no mpankafy ny lamosin'ny rivotra. Rehefa avy naka izany ho fampisehoana roa amin'ny toetr'andro 95 , azoko lazaina anao fa azo antoka fa misy tanjona.
Famaritana: Famerenana famerenana avy amin'ny mpamorona. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Politika etika.
Inona no ao amin'ny kitapo fisotroan-drivotra?
Aiza no misy anao? Backcountry vs. Frontcountry vs. Slackcountry
Torolalana ho an'ny fitsangantsanganana tsara indrindra amin'ny Hazakazak'i Joshua Tree National Park
Afaka miparitaka amin'ny vehivavy ve ny vehivavy rehefa mamindra?
Fomba handehanana amin'ny Scree
Aiza no hitadiavanao ireo mpitsoa-ponenana?
Ahoana no hikorontana ny lobolobo misy ranom-boasary
Ny helo Hindenburg
Mianara bebe kokoa momba ny Rock Chert
Fanontaniana amin'ny teny
Mampiasa diksionera famaritana iray mba hanatsarana ny Anglisy
Ady An-trano Amerikanina: Jeneraly Lehibe Henry Halleck
Ny Linguistique Aorian'ny Emojis
Ny fanjakan'i Kosy
Ny fomba hanoratana ny Ode
'Franchise Movie Ginger Snaps'
Famaritana ho an'ny mpampiasa
Grove City College GPA, SAT sy ACT Data
Inona no fahasamihafana eo amin'ny "Avere" sy ny "Tenere" amin'ny teny italiana?
Atheism ho an'ny mpangataka
Understanding French Adjectives
Ny Paleolithika ambony - ny olona ankehitriny dia mitondra an'izao tontolo izao
Inona no K-Code Ford Mustang?
Fanehoan-kevitry ny Batterin'olombelona
House Style Guide amin'ny trano Amerikanina
Fikambanan'ny Firenena avy any Azia Atsimoatsinanana - ASEAN
Chevy Tahoe Fitobahan'orinasa sy Orifice Tube
Fampianarana ambony ao amin'ny Oniversite avaratra-andrefana
Hira fialan-tsasatra Classic nanomboka tamin'ny 1920 ka hatramin'ny 1950
Izay tianao indrindra amin'ny fiainana
Assonance definition sy ohatra
Tena ilaina amin'ny mpampianatra ny olon-dehibe